Kungani Ama-infographics Enza Amathuluzi Okumaketha Amahle | Martech Zone
Kungani Ama-infographics Enza Amathuluzi Amakhulu Okumaketha
NgoLwesine, ngo-Okthoba 11, 2012 NgoLwesine, ngo-Okthoba 11, 2012 Douglas Karr
Njengoba i-infographics ithandwa kakhulu, baphinde badwebe ithoni lokugxeka ngekhwalithi yabo nokunemba kwabo. Ngiyayithanda i-infographics ngoba ihlinzeka ngendawo yokubuka ukuchaza imininingwane. Ukuthi imininingwane iyiqiniso yini noma cha kungenye indaba… futhi i-infographic engacwaningwa kahle ingadonsela amathani okugxeka futhi ilimaze idumela lenkampani eliyicindezelayo. Konke kufanelekile othandweni nase-infographics. 🙂
Amehlo anweba ubuchopho futhi abantu abangaphezu kwesigamu sabantu bangabafundi ababukwayo. Unalokhu engqondweni, abashicileli namabhizinisi bangazuza kulolu shintsho. Kunesidingo sedatha edluliswa ngokushesha, ebumbene futhi ebukekayo.
Lokhu infographic, Kungani Ama-infographics Enza Amathuluzi Amakhulu Okumaketha kusuka kubaklami be-Infographic base-UK uNeo Mammalian Studios, ushaya kuwo wonke amasilinda alungile kulokho okwenza i-infographics isebenze… indlela yokubukisa yokusabalalisa idatha, isidingo esikhulayo esivela kubalaleli bakho, kanye nomphakathi okulula ukwabelana ngakho! Kuyi-trifecta yokumaketha kokuqukethwe. Funda kabanzi ngokuthi ungakwenza kanjani sebenzisa futhi ukhuthaze i-infographics yakho.
Tags: infographicukumaketha kwe-infographicI-Marketing InfographicsIzitudiyo ze-neo mammalian
Ukuphathwa Kwemidiya Yezokuxhumana Komphakathi kusuka kuSyncapse
I-Oct 11, i-2012 ku-8: i-09 PM
I-Plus infographics idala izithombe ezinhle kakhulu ezizodonsela abafundi ikakhulukazi mina. Ngokubheka ezithombeni, ngingaqonda ukuthi i-infographic ifuna ukuveza ini.
Okthoba 12, 2012 ngo-2: 23 AM
Kungikhumbuza okuthile engikuzwile kumhleli wephephandaba kudala: Ukuthi ama-infographics azodlala indima enkulu ekukhangiseni amaphephandaba. Kuvela ukuthi kuyiqiniso nakwabezindaba okuthiwa abasha, futhi.